Sawirro: Taalladii loo dhisay xasuuqii Waagala oo la burburiyay - BBC Somali
Sawirro: Taalladii loo dhisay xasuuqii Waagala oo la burburiyay
Taalladii loo dhisay xasuuqii Waagala oo la burburiyay
Dadweyne caraysan oo ka soo horjeeda in la hormariyo banaanka Qorraxeey ee taariikhiga ah ee Wajeer ayaa burburiyay taallada lagu xusayay xasuuqii Waagala ee ku taallay banaankaas.
Waxaa la burburiyay goobtii ay ku qornaayeen magacyada dad kor u dhaafayay 500 oo ruux oo la sheegay in lagu dilay xasuuqa Waagala ee ka dhacay Wajeer sanadkii 1984.
Ururrada u dooda xuquuqda aadanaha oo iyagu qeyb ka ahaa dhismaha taalladan ayaa cambaareeyay burburinteeda.
Taallada la burburiyay ayaa la furay 14-kii bishii February 2014-ka, iyadoo la xusayay 30 sano guuradii ka soo wareegtay xasuuqii Waagala. Dumarkan waa dadkii ehelladooda ay ku dhinteen xasuuqaas, waxay ka qeybqaateen xuska.
Guddoomiyaha Degaanka Wajeer, Axmed Cabdullahi, ayaa furay taalladan iyadoo ay daawanayeen qaar ka mid ah dadweynaha Wajeer.
Dadweynaha Wajeer ayaa u daawasho tegayay taalladaas tan iyo markii la dhisay. Mudanaha laga soo doorto Bariga Wajeer, Cabas Sheikh, iyo qaar ka mid ah dadweynaha ayaa halkan daawanaya taallada markii la furay kaddib